Shily: Eritreritra momba ny horohorontany sy ny dingana fanarenana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Jona 2018 3:12 GMT
Ny Fihaonamben'ny Median'olon-tsotra Global Voices 2010 dia mikasa hampandray anjara ireo bilaogera Shiliana amin'ny alàlan'ny fifaninanana bilaogy nokarakaraina niaraka tamin'ny fiarahamiasan'ny fikambanana OCD Iberoamérica. Tamin'ny andro voalohan'ny hetsika ho an'ny daholobe, bilaogera Shiliana dimy no nomem-boninahitra ho mpifaninana farany, ka ny iray no hibata ny loka lehibe indrindra.
Ny fifaninanana dia natao handrisihana ireo bilaogera Shiliana mba haneho ny heviny sy hizaran'izy ireo ny heviny mikasika ny toe-draharaha ara-tsosialy amin'izao fotoana izao taorian'ny horohorontany sy nandritra ny fanarenana ny firenena. Mpanoratra roa ato amin'ny Global Voices, Silvia Viñas sy Felipe Cordero no anisan'ny mpitsara tamin'ny fifaninanana. Ireto manaraka ireto ny 4 finalista.
Carolina Castro mahita ny toe-draharaha mampalahelo ao amin'ny vondrom-piarahamonina sasany voakasika [es]:
Androany, Constitución no tanàna sisa tavela. Toy ny hoe tsy nisy tsunami nandalo efa-bolana lasa izay, tahaka ny iray amin'ny Alahady mandrakizay ny zava-misy. Tsy dia goavana loatra ny fahasamihafan'ny vondrom-piarahamonina hafa voakasiky ny horohoron-tany, mbola tsy Alatsinainy mihitsy eto. Mbola tsy niverina ny varotra ary mbola tsy niverina niasa ny vahoaka. Ny fahanginan'ny vahoaka no toetra manjaka ao an-toerana. Tsy mandalo ny olon-dehibe na dia hiarahaba vetivety fotsiny aza ary tsy milalao eny an-dalambe ny ankizy. Mandeha am-pahanginana, mihinana amim-pahanginana, ary maro, no miresaka mangina.
Na izany aza, eo an-dalam-panarenana ny firenena ary manoratra momba ny fanahin'ny Shiliana i Cecilia Monge: